‘मेरा श्रीमानले के गर्न सके ?’ भन्दै सलमानका भाइ सोहिललाई श्रीमती सीमाले जब सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेपछि …. – Enepali Samchar
‘मेरा श्रीमानले के गर्न सके ?’ भन्दै सलमानका भाइ सोहिललाई श्रीमती सीमाले जब सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेपछि ….
February 20, 2021 adminLeaveaComment on ‘मेरा श्रीमानले के गर्न सके ?’ भन्दै सलमानका भाइ सोहिललाई श्रीमती सीमाले जब सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेपछि ….
e nepaalisamchaar /बलिउडमा वंशवादको विषयमा चलिरहेको बहसमा अब सोहेल खानकी श्रीमती सीमा खानको टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । सीमा खानले सेलिब्रिटी परिवारको हुँदासमेत धेरै मानिसहरुले बलिउडमा केही ठूलो गर्न नसकेको आफूले धेरै उदाहरण देखेको बताएकी छिन् ।
प्रचण्ड खेमाका वर्षमानले नै भने- ‘संसद् विघटनबारे न्यायालयको फैसला स्वीकार गर्छौं’
पेट दु’खेर अस्पताल गएकी नाबालिका २२ हप्ताको ग’र्भवती भएको पत्ता लगेपछि …
October 11, 2020 November 1, 2020 admin